Global Voices teny Malagasy » Mamela Ny Vondrom-piarahamonina Tompotany Kolombiana Handefa Antserasera Ny Fampianarana Ny Fiteniny Ny ‘En Mi Idioma’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Mamela Ny Vondrom-piarahamonina Tompotany Kolombiana Handefa Antserasera Ny Fampianarana Ny Fiteniny Ny ‘En Mi Idioma’
Voadika ny 17 Jolay 2017 4:39 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Kolombia, Fiteny, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Teratany
Pikantsarin'ny lahatsary “Süchikua Woumain – Ruta de la Memoria Oral e intangible del Pueblo Wayuu” avy amin'i Ramiro Epiayu Morales. Lahatsary nalefa tao amin'ny En Mi Idioma ary nahazoan-dalàna miaraka amin'ny lisansa Creative Commons license
Nizara fahalalana momba ny fiteniny mba ahafan'ny taranaka fara aman-dimby mahafantatra momba ireo singa manan-danja avy amin'ny kolontsain'izy ireo ny vondrom-piarahamonina tompotany manerana an'i Kolombia . Mba hanamorana izany fampianarana manan-danja izany dia nandray anjara tamin'ny lesona mikasika ny fiteniny sy tamin'ny haino aman-jery ny vondrom-piarahamonina tompotany miisa enina, ary nijoro vavolombelona voalohany tao amin'ny sehatra antserasera antsoina hoe En Mi Idioma  (Amin'ny Fiteniko).
Hetsika fiaraha-miasa teo amin'ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao sy ny Teknolojian'ny Serasera  (ICTs) ary ny fikambanana tsy miankina Kolombiana Colnodo  ny tetikasa. Nomena fiofanana ireo vondrom-piarahamonina izay liana tamin'ny fandraisana anjara, ary afaka nisafidy ny vondrona tamin'ny fanaovana ny votoatiny ho an'ny mpikambana vondron-piarahamonina irery ihany izay nomena solonanarana sy tenimiafina manokana. Ny vondron-piarahamonina sasany, na izany aza, nisafidy ny hanao ny fitaovana rehetra ho maimaim-poana ho an'ny daholobe izay liana amin'ny fianarana bebe kokoa momba ny fiteny sy ny kolontsaina.
Namtrik , Nasa Yuwe , Emberá Chamí , Wayuunaiki , Barí , sy ny Kichwa  no fitenindrazana hita ao amin'ny sehatra, ary ny fiteny Palenquero  ihany koa , izay fiteny kreôla mifototra amin'ny teny Espaniola.
Ohatra, manazava ny tranonkalan'ny Embera Chamí  ao amin'ny pejy fanolorana fa mandrisika ny fampandrosoana ny rafitra ara-tsoratra ihany koa ny fandraisana anjara ao amin'ny tranonkala:
…en nuestro pueblo hay discusiones sobre cómo escribir nuestro idioma, pues durante años fuimos y seguimos siendo culturas de lo oral, pero hoy como estrategia de pervivencia consideramos importante construir un código escrito. Es por esto que encontrarás diferencias en algunos textos escritos en Êbêrâ Β'e'dea, eso no te debe angustiar, por el contrario ¡anímate a enriquecer nuestro idioma con tus aportes!
… misy adihevitra mikasika ny fomba fanoratana ny teninay ato amin'ny vondrom-piarahamoninay, nanana kolontsaina am-bava izahay nandritra ny taona maro ary mbola manohy izany hatramin'izao, kanefa mihevitra izahay fa zava-dehibe ny manorina ny rafitra ara-tsoratra ho toy ny paikady velona. Noho izany antony izany no mety hahitanareo fahasamihafana sasany amin'ny andinin-teny voasoratra amin'ny teny Êbêrâ Β'e'dea (Embera Chamí), kanefa tsy tokony hanahy momba izany ianareo, fa kosa mandrisika anareo izahay mba hanatsara ny fitenintsika miaraka amin'ny fandraisanareo anjara!
Misy ny sasany amin'ireo lesona mikasika ny fiteny izay noforonin'ny mpandray anjara amin'ny teny Embera Chamí no mifantoka amin'ny sakafo manokana ( “Chi chikorârâ”), ny biby ( “Chi ânimârârâ”), ny zavamaniry ( “Chi ‘Bakururâ”), ny fivoaran'ny fiainana ( “ariwayu”), ary ny fiteny andavanandro ( “Dachi aribia bedeabari”).
Mba hanampiana amin'ny fanoratana ny fiteny, nanome kitendry virtoaly amin'ny fomba fanoratana izay tsy hita any amin'ny kitendry sasany ihany koa ny tranonkalan'ny Embera Chamí .
Pikantsarin'ny fitendry virtoaly ho an'ny fiteny Emberá Chamí.
Azo jerena amin'ny endrika ivelan'ny aterineto ihany koa ny En Mi Idioma satria araka ny fahafantarana dia maro no maniry hiditra amin'ity votoaty ity kanefa mety tsy manana ny fahafahana miditra amin'ny aterineto. Midika izany fa hahatratra mora foana ny mpijery ny ezaka avy amin'ny vondrom-piarahamonina tompotany amin'ny fanomezana fampianarana ao amin'ny haino aman-jery sy amin'ny fiteny .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/17/103447/
 En Mi Idioma: http://www.enmiidioma.org/
 Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao sy ny Teknolojian'ny Serasera: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-channel.html
 Nasa Yuwe: http://nasa.enmiidioma.org/view/index1.php
 Emberá Chamí: http://emberachami.enmiidioma.org/view/index1.php